Nahazo fahazoan-dàlana voalohany hampiasana ebikes any Santiago, Silia i Scoot
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Nahazo fahazoan-dàlana voalohany hampiasana ebikes any Santiago, Silia i Scoot
Enga anie 28, 2019
Scoot, ilay orinasam-pitaterana herinaratra nizara tany am-boalohany, dia mandefa ny ebike iraisan'izy ireo vaovao any amin'ny distrikan'i Las Condes any Santiago, Chile.
Tamin'ny hetsika nataon'ny mpanao gazety tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, nanambara ny ben'ny tanàna Joaquin Lavin fa nahazo fahazoan-dàlana 650 i Scoot hiasa ebikes iraisana, ka io no mpandraharaha bisikileta elektrika zaraina voalohany. Ny Scoot dia hitatra amin'ny faritra hafa any Santiago miaraka amin'ny ebikes sy scooter elektrika fanampiny amin'ny volana ho avy.
“Ny ebike vaovao misy antsika dia dingana lehibe mandroso amin'ny fivezivezena mandeha amin'ny herinaratra any an-tanàna. Faly izahay mampahafantatra azy io voalohany any Santiago, amin'ny fifampidinihana akaiky amin'ny fitantanan'i Las Condes, "hoy i Michael Keating, mpanorina ary filohan'ny Scoot.
Ny ebikes an'i Scoot dia manana hafainganam-pandeha 25 kilometatra / ora ary afaka mamoha ary avy eo dia peso shiliana 100 isa-minitra handehanana. Ny ebike tsirairay dia miaraka amina hidin-trano marani-tsaina izay ahafahan'ny mpitaingina miaro ny fiara amin'ny bisikiletan'ny bisikileta isaky ny faran'ny fandehanany. Araka ny voaporofo amin'ny scooter elektrika an'ny Scoot, ny hidin-tsain'i Scoot dia manome antoka ny tambajotram-pifandraisana azo antoka sy azo antoka. Ny fampidirana ebikes amin'ny serivisin'izy ireo ao Santiago dia mampiseho ny fomba anoloran'ny Scoot vahaolana feno kokoa amin'ny filan'ny fivezivezena an-tanàna.
Miaraka amin'ny fanombohan'ny ebikes ao Santiago, Scoot no lasa orinasa voalohany any Silia izay miasa amina karazana fiara elektrika iraisana roa amin'ny tanàna iray. Ary i Scoot dia mikasa ny hivoatra amin'ny fahombiazan'ny serivisin'izy ireo any Santiago amin'ny alàlan'ny fanohizana manitatra any Amerika Latina.
Ny fiaraha-miasa amin'i Scoot amin'i Las Condes sy ny Ben'ny tanàna Lavin dia mihanaka lavitra amin'ny fiara elektrika. Tamin'ny volana lasa teo dia niara-niasa tamin'ny ben'ny tanàna Lavin i Scoot hamoaka ny drafitra Holland, izay nametraka zotra fitaterana hafainganam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny faritra El Golf. Notetezin'ny ekipa mpampihatra fiarovana amin'ny scooter Scoot, ity hetsika vaovao ity dia namorona habaka hafainganam-pandeha 30 kilaometatra / ora ho an'ny fiara, amin'izay ahafahan'ny bisikileta, scooter ary mpandeha an-tongotra mivezivezy am-pilaminana amin'ireo lalana be olona indrindra ao Chile.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Bartlett dia nidera an'i Seaga ho toy ny kisarisary, tompon-daka amin'ny vahoaka
Tale Jeneraly Carlson Wagonlit Travel: Mila miambina ny fivarotana olona